Wararka Maanta: Talaado, Mar 26, 2013-Roobab Dhaliyay Daadad sababay khasaarooyin nafeed iyo mid Hantiyeed oo ka Dalka Jabuuti oo daris la ah Soomaaliya
Daadad ka dhashay roobabkan ayaa burburiyay guryo fara badan, iyadoo dadkii ay waxyeelladu kasoo gaartay lagu daadgureeyay diyaaradaha ay leeyihiin milateriga dalkaas ee qumaatiga u kaca, waxaana roobabkan ay noqonayaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dalkaas ka da’a sannadahan.
Isbitaalka magaalada Jabuuti ayaa la dhigay dhaawacyada dadkii ay kasoo gaartay waxyeellada daadadka ka dhashay roobabka, kuwaasoo u badan caruur iskuullada dalkaas dhigayay oo ay guryo ku dumeen.
Xukuumadda dalka Jabuuti ayaa sheegtay in musiibadan ay tahay mid dabiici ah, daadadka ka dhashay roobabkuna ay khasaarooyin badan ka geysteen guud ahaan dalka Jabuuti.
Howgallada lagu caawinayo dadka ay daadadku saameynta ku yeesheen ayaa si guud uga socda dalkaas oo ka mid ah dalalka ku yaalla Bariga Afrika, iyadoo tani ay noqonayso dhibaatadii ugu ballaarnayd ee ay roobabku da’ay ay ka geysteen muddo sannado ah.
Dalka Jabuuti ayaa wuxuu ka mid yahay dalalka ku teedsan badda cas ee kuleylaha ah, iyadoo aysan ka di’in roobab fara badan, waxaase sannadaha qarkood ka da’a roobab sidan oo kale khasaarooyin badan geysta.
Xilliga ayaa dalka Jabuuti waxaa ka jira qabow, iyadoo dadka qaarkood ay u sheegeen warbaahinta in qabowga sannadkan jira uu aad uga duwan yahay kuwii hore kana qabow yahay.